Ukuthanda UNkulunkulu Kuphela Okuwukukholwa KuNkulunkulu Ngeqiniso | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Namhlanje, njengoba nifuna ukuthanda nokwazi uNkulunkulu, kolunye uhlangothi, kufanele nibekezelele ubunzima kanye nokucwengwa, futhi kolunye, kumele nikhokhe inani. Asikho isifundo esibaluleke ukwedlula isifundo sokuthanda uNkulunkulu, futhi kungathiwa isifundo abantu abasifundayo esikhathini sabo sonke sokuphila bekholwa ukuthi ungamthanda kanjani uNkulunkulu. Okusho ukuthi, uma ukholwa kuNkulunkulu kufanele umthande uNkulunkulu. Uma ukholwa kuphela kuNkulunkulu, kodwa ungamthandi, awukalutholi ulwazi ngoNkulunkulu, futhi awukaze umthande uNkulunkulu ngothando lweqiniso olusuka phakathi enhliziyweni yakho, kusho ukuthi ukholo lwakho kuNkulunkulu luyize; uma, okholweni lwakho kuNkulunkulu, awumthandi uNkulunkulu, uphilela ize, futhi impilo yakho yonke iphansi kunazo zonke. Uma, empilweni yakho yonke, ungakaze umthande noma umanelise uNkulunkulu, pho siyini isizathu sokuphila kwakho? Akukhona yini ukusebenzela ize lokho? Okusho ukuthi, uma abantu bezokholwa kuNkulunkulu futhi bathande uNkulunkulu, kufanele benze konke okusemandleni abo bakhokhe inani. Kunokuba bazame ukuziphatha ngendlela ethile ebonakalayo, kufanele bafune ukuqonda kwangempela ekujuleni kwezinhliziyo zabo. Uma ukuthakasela ukuhlabelela nokudansa, kodwa ungakwazi ukwenza iqiniso, kungashiwo yini ukuthi uyamthanda uNkulunkulu? Ukuthanda uNkulunkulu kudinga ukuthi ufune intando kaNkulunkulu ezintweni zonke, futhi uhlole ujule ngaphakathi kuwe uma wehlelwa yinoma yini, uzama ukuqonda intando kaNkulunkulu, uzama ukubona ukuthi iyini intando kaNkulunkulu kulolu daba, ukuthi yini afisa uphumelele ukuyenza, nokuthi kufanele uyiqikelele kanjani intando Yakhe. Isibonelo: Kwenzeka okuthile okudinga ukuthi ubekezelele nobunzima, okufanele ngaleso sikhathi uqonde ukuthi iyini intando kaNkulunkulu, nokuthi kufanele uyiqikelele kanjani intando Yakhe. Akumele uzenelise wena: Qala ngokuzibeka eceleni. Ayikho into edeleleke njengenyama. Kufanele uzame ukwanelisa uNkulunkulu, futhi kufanele wenze umsebenzi wakho. Ngemicabango enjalo, uNkulunkulu uzoletha ukukhanyiseleka okukhethekile kuwe kulolu daba, futhi inhliziyo yakho izoduduzeka. Noma kukhulu noma kuncane, uma okuthile kwenzeka kuwe, kufanele uqale ngokuzibeka eceleni ubuke inyama njengento ephansi kunazo zonke. Ngokunyukela ukwanelisa inyama, iya ngokukhululeka ukwenza umathanda; uma uyanelisa okwamanje, ngokulandelayo izofuna okuningi, futhi njengoba lokhu kuqhubeka, ugcina usuthanda okwenyama nakakhulu. Inyama ihlale inezifiso ezidlulele, ihlale icela ukuba uyigculise, nokuthi uyanelise ngaphakathi, noma ngezinto ozidlayo, lokho okugqokayo, noma uvuke ngolaka singekho isidingo, noma uvumele bonke ubuthakathaka kanye nobuvila bakho…. Uma uqhubeka nokugculisa inyama, ziya ngokuba nkulu izifiso zayo, futhi ziya ziba nkulu izinkanuko zenyama, kuze kufike lapho inyama yabantu isigcwele imibono ejule nakakhulu, iphinde ingalaleli uNkulunkulu, futhi izikhukhumeze, futhi ibe nokungabaza ngomsebenzi kaNkulunkulu. Uma uqhubeka nokugculisa inyama, ilapho buya ngokuba bukhulu khona ubuthakathaka benyama; uyohlala uzwa sengathi akekho onozwelo nobuthakathaka bakho, uyohlale ukholwa ukuthi uNkulunkulu usenze kwaze kweqa, futhi uyothi: “Angaba kanjani nesihluku esingaka uNkulunkulu? Kungani engabaniki abantu ikhefu?” Uma abantu beyiyekelela kakhulu inyama futhi beyenza igugu kakhulu, bese bezichithakalisa. Uma umthanda ngempela uNkulunkulu, futhi ungagculisi inyama, uyobe sewubona ukuthi yonke into uNkulunkulu ayenzayo ilungile, futhi inhle kakhulu, nokuthi ukuqalekisa Kwakhe ukuhlubuka kwakho nokwahlulela Kwakhe ukungalungi kwakho kufanele. Kuyoba khona izikhathi lapho uNkulunkulu ekujezisa futhi ekuqondisa khona, futhi avuse isimo ukuze akuqinise ekuphoqa ukuba uze phambi Kwakhe—futhi uyohlala uzwa ukuthi lokho uNkulunkulu akwenzayo kuhle kakhulu. Ngakho uyozwa sengathi abukho ubuhlungu obungako, nokuthi uNkulunkulu akuve ethandeka. Uma uvuma bonke ubuthakathaka benyama, bese uthi uNkulunkulu wenza kuze kweqe, uyohlala njalo uzwa ubuhlungu, futhi uyohlala udangele, futhi uyohlala ungacacelwa ngawo wonke umsebenzi kaNkulunkulu, futhi kuyoba sengathi uNkulunkulu akanalo nhlobo uzwelo ngobuthakathaka bomuntu, kanti futhi akazi ngezingqinamba zomuntu. Ngakho uyozizwa unosizi futhi uwedwa, sengathi uzwiswe ubuhlungu bokucwaswa kakhulu, futhi ngalesi sikhathi uyoqala ukukhononda. Uma uya uvumela bonke ubuthakathaka benyama ngale ndlela, uyonyukela ukuzwa ukuthi uNkulunkulu wenza izinto kuze kweqe, size sishube isimo ngendlela yokuthi uyowuphika umsebenzi kaNkulunkulu, futhi uqale ukumelana noNkulunkulu, futhi ugcwale ubuhlongandlebe. Ngakho kufanele uhlubuke enyameni, futhi ungayivumi yonke into eyifunayo: “Umyeni (inkosikazi), izingane, amathuba, umshado, umndeni wami—konke akusho lutho! Enhliziyweni yami kukhona uNkulunkulu kuphela, futhi kufanele ngenze konke okusemandleni ami ukuze ngigculise uNkulunkulu, hhayi inyama.” Kufanele ube nalesi sinqumo. Uma uhlale unqume kanjalo, kuyothi lapho wenza iqiniso, futhi uzibeka eceleni, uyokwazi ukukwenza ngokuzikhandla okuncane nje. Kuthiwa kwakukhona umlimi owabona inyoka emgwaqweni isiphenduke iqhwa amakhaza. Umlimi wayithatha wayigona esifubeni, emva kokuthi inyoka seyiluleme yaluma umlimi wafa. Inyama yomuntu ifana nale nyoka: ubunjalo benyama ukulimaza izimpilo zabo—uma ithola intando yayo ngokuphelele, impilo yakho iba yinto elahliwe. Inyama ngekaSathane. Kuyona kunezifiso ezidlulele, izicabangela yona yodwa, ifuna ukujabulela ukuthokomala, ukuzitika ngokunethezeka, ukubhuquza ebuvileni nokujika nelanga uzihlalele nje, futhi uma usuyigculise kwaze kwafika ezingeni elithile, iyobe seyikushwabadela ekugcineni. Okusho ukuthi, uma uyanelisa namhlanje, ngokuzayo izofika isifuna okunye. Ihlala inezifiso ezeqile ezimoshayo kanye nezinto ezintsha ezifuna ngenkani, futhi isizakala ngokuyivumela kwakho inyama ukukwenza ukuthi uyazise nakakhulu futhi uphile ekuthokomaleni kwayo—futhi uma ungayinqobi, uyogcina uzichithakalisile. Noma uzokwazi ukuzuza impilo phambi kukaNkulunkulu, nokuthi isiphetho sakho siyoba yini ekugcineni, kuncike ekutheni uhlubuka kanjani enyameni yakho. UNkulunkulu ukusindisile, futhi wakukhetha waphinda wakumisela phambili, kepha uma namuhla ungazimisele ukumanelisa, awuzimisele ukwenza iqiniso, awuzimisele ukuhlubuka enyameni yakho uqobo ngenhliziyo ethanda uNkulunkulu ngeqiniso, ekugcineni uyozibhidliza ngokwakho, ngaleyo ndlela uyobhekana nobuhlungu obugedlisa amazinyo. Uma uvumela inyama njalo, uSathane uzokudla akushwabadele ngaphakathi, futhi akushiye ungenampilo, noma ukuthintwa uMoya oNgcwele, luze lufike usuku lapho usumnyama ngokuphelele ngaphakathi. Uma uphila emnyameni, uyobe sewuthunjwe uSathane, ngeke usaba noNkulunkulu enhliziyweni yakho, futhi ngaleso sikhathi uyobuphika ubukhona bukaNkulunkulu futhi umshiye. Ngakho, uma ufisa ukuthanda uNkulunkulu, kufanele wenze konke okusemandleni akho ukhokhe inani lobuhlungu futhi ubekezelele ubunzima. Asikho isidingo sentshisekelo nobunzima bangaphandle obungabonwa, ukufunda kakhulu kanye nokuya le nale; kunalokho, kufanele ubeke eceleni izinto ezingaphakathi kuwe: imicabango edlulele, izinto eziyizidingo zakho ngokwakho, kanye nokuzibonelela, imibono kanye nokukhuthazwa kwakho. Isho njalo intando kaNkulunkulu.
Ukubhekana kukaNkulunkulu nesimo sangaphandle sabantu nakho kuyingxenye yomsebenzi Wakhe; ukubhekana nobuntu babantu bangaphandle obungajwayelekile, ngokwesibonelo, noma inqubo-mpilo nemikhuba yabo, izindlela namasiko abo, kanye nezindlela zabo zokwenza okungaphandle, kanye nentshisekelo yabo. Kodwa uma ecela ukuba benze iqiniso futhi bashintshe izimo zabo, lokho obhekene nakho ikakhulukazi ukukhuthazeka nemibono engaphakathi kubo. Ukubhekana nesimo sakho sangaphandle kuphela akunzima; kufana nokukucela ukuthi ungadli izinto ozithandayo, okuyinto elula. Lokho okuthinta imibono onayo ngaphakathi kuwena, nokho, akulula ukuthi uyishiye: kudingeka ukuthi uhlubuke enyameni, futhi wenze konke okusemandleni, futhi uzwe ubuhlungu phambi kukaNkulunkulu. Lokhu kunjalo impela ngokuphathelene nokukhuthazeka kwabantu. Kusukela esikhathini sokuqala kwabo ukukholwa kuNkulunkulu kuze kube inamuhla, abantu bebelokhu begcine ukukhuthazeka okungalungile. Uma ungalenzi iqiniso, uzwa sengathi zonke izisusa zakho zilungile, kodwa uma into ethile yenzeka kuwe, uyobona ukuthi kuningi ukukhuthazeka okungalungile phakathi kwakho. Ngakho, uma uNkulunkulu ephelelisa abantu, ubenza babone ukuthi kunemibono eminingi ngaphakathi kubo evimba ulwazi lwabo ngoNkulunkulu. Uma ubona ukuthi ukukhuthazeka kwakho akulungile, uma ukwazi ukuyeka ukwenza ngokuhambisana nemibono nokukhuthazeka kwakho futhi ukwazi ukufakazela uNkulunkulu, futhi ume uqine endaweni yakho kukho konke okwenzeka kuwe, lokhu kuyakhomba ukuthi uyihlubukile inyama. Uma uhlubuka enyameni, nakanjani kuzoba khona impi ngaphakathi kwakho. USathane uzozama ukwenza abantu bamlandele, uzozama ukubenza ukuthi balandele imibono yenyama futhi baphakamise izidingo zenyama—kodwa amazwi kaNkulunkulu azokhanyisela futhi akhanyise abantu ngaphakathi, futhi ngalesi sikhathi kukuwe ukuthi ulandela uNkulunkulu noma ulandela uSathane. UNkulunkulu ucela abantu ukuthi benze iqiniso ngokoqobo ikakhulukazi ukuze babhekane nezinto ezingaphakathi kubo, ukubhekana nemicabango yabo, nemibono engeyona eyenhliziyo kaNkulunkulu. UMoya oNgcwele uthinta abantu ezinhliziyweni zabo, futhi abakhanyisele aphinde abakhanyise. Ngakho ngemuva kwakho konke okwenzekayo kunempi: Njalo uma abantu benza iqiniso, noma benza uthando lukaNkulunkulu, kunempi enkulu, futhi nakuba konke kungabukeka kuhamba kahle enyameni yabo, ekujuleni kwezinhliziyo zabo impi yokuphila nokufa, eqinisweni izobe ihlangene phezulu empeleni—futhi ingemuva kwale mpi ethunqa uthuli kuphela, emuva kokucabanga okujule kakhulu lapho kunganqunywa khona mayelana nokunqoba noma ukwehlulwa. Umuntu akazi noma ahleke noma akhale yini. Ngenxa yokuthi ukukhuthazeka okuningi okungaphakathi kubantu akulungile, okunye ngenxa yokuthi omningi umsebenzi kaNkulunkulu awuvumelani nemibono yabo, uma abantu benza iqiniso, impi enkulu iliwa esithe. Sebelenzile leli qiniso esithe abantu babe sebekhale imvula yezinyembezi ngaphambi kokunquma ekugcineni ukwanelisa uNkulunkulu. Yingenxa yale mpi eyenza ukuthi abantu babhekane nokuzwa ubuhlungu nokucwengwa; lokhu ukuhlupheka kwangempela. Uma impi isiphezu kwakho, uma ukwazi ngempela ukuma ngasohlangothini lukaNkulunkulu, uzokwazi ukwanelisa uNkulunkulu. Ukuhlupheka endleleni yokwenza iqiniso akunakho ukugwemeka; uma, lapho belenza iqiniso, yonke into ngaphakathi kubo ilungile, bebengeke badinge ukupheleliswa nguNkulunkulu, futhi bekungeke kube khona impi, futhi bebengeke bezwe ubuhlungu. Yingoba ziningi izinto ezikubantu ezingenakusetshenziswa nguNkulunkulu, futhi kuningi ukuhlubuka kwenyama, ngendlela yokuthi abantu badinga ukuthi bafunde isifundo sokuhlubuka enyameni kakhulu impela. Yilokhu uNkulunkulu akubiza ngokuzwa ubuhlungu acela umuntu ukuba adlule kukho kanye Naye. Lapho uhlangabezana nezingqinamba, phuthuma futhi uthandaze kuNkulunkulu: O Nkulunkulu! Ngifisa Ukukwanelisa, ngifisa ukubhekana nobunzima bokugcina ukuze nganelise inhliziyo Yakho, futhi akukhathaleki ukuthi zinkulu kangakanani izithiyo engizohlangabezana nazo, kufanele ngikwanelise nakuba kunjalo. Noma kudingeka nginikele ngempilo yami yonke, kusafanele ngikwanelise! Ngalokhu ukuzimisela, uma uthandaza kanjalo uyokwazi ukuma uqine ebufakazini bakho. Njalo uma benza iqiniso, njalo babhekana nezilingo, njalo bayavivinywa, futhi njalo umsebenzi kaNkulunkulu ubekwa kubo, abantu babhekana nobuhlungu obukhulu. Konke lokhu kuyisivivinyo kubantu, ngakho phakathi kwabo bonke kunempi. Leli inani abalikhokhayo ngempela. Ukufunda amazwi kaNkulunkulu kakhulu nokuya le nale uphansi phezulu kakhulu nokho kuyinani elincane. Yilokho abantu ekufanele bakwenze, kuwumsebenzi wabo; futhi kuwumthwalo ekufanele bawuthwale, kodwa abantu kufanele babeke eceleni lokho ngaphakathi kubo okufanele kubekwe eceleni. Uma ungakwenzi lokho, akunandaba ukuthi ubuhlungu bakho obuzwa ngaphandle bukhulu kangakanani, nokuthi uye le nale kangakanani, konke kuyoba yize! Okusho ukuthi, izinguquko ngaphakathi kuwena kuphela ezibonisayo noma ubunzima bakho bangaphandle bunesigqi. Uma isimo sakho sangaphakathi sesishintshile futhi sewulenzile iqiniso, konke ukuhlupheka kwakho kwangaphandle kuyozuza ukwamukelwa nguNkulunkulu; uma kungabanga noshintsho esimweni sakho sangaphakathi, akusho lutho ukuthi ubhekana nokuhlupheka okungakanani noma uya le nale kangakanani ngaphandle, ngeke akwamukele uNkulunkulu—futhi ubunzima obungemukelwanga uNkulunkulu buyize. Ngakho, ukuthi inani olikhokhile liyamukelwa uNkulunkulu kuncike ekutheni lubekhona yini ushintsho noma cha kuwena, futhi nasekutheni uyalenza yini iqiniso noma cha, futhi uhlubukile yini ekukhuthazweni kwakho nasemibonweni ukuze uthole ukwanelisa intando kaNkulunkulu, ulwazi lukaNkulunkulu, kanye nokwethembeka kuNkulunkulu. Akunandaba ukuthi uyaluza kangakanani, uma ungakaze ukwazi ukuhlubuka ekukhuthazweni kwakho, ufuna kuphela izenzo nentshisekelo yangaphandle, futhi ungachithi isikhathi unaka impilo yakho, ngakho-ke ubunzima bakho buyobe buyize. Uma, endaweni ethize, kukhona okuthile ofuna ukukusho, kodwa ngaphakathi uzwa ukuthi ukukusho akulungile, ukuthi ukukusho akunalo usizo kubafowenu nodadewenu, futhi kungabalimaza, ngakho-ke ngeke ukusho, ukhethe ukufela ngaphakathi, ngoba lawa mazwi akakwazi ukwanelisa intando kaNkulunkulu. Ngaleso sikhathi, kuyoba khona impi ngaphakathi kuwe, kodwa uyozimisela ukuzwa ubuhlungu futhi unikele lokho okuthandayo, uyozimisela ukubhekana nobunzima ukuze wenelise uNkulunkulu, futhi nakuba uzozwa ubuhlungu ngaphakathi, ngeke uvumele inyama, futhi inhliziyo kaNkulunkulu iyokwaneliseka, futhi uyoduduzeka ngaphakathi. Lokhu ukukhokha inani ngempela, futhi inani elifiswa nguNkulunkulu. Uma wenza ngale ndlela, uNkulunkulu uyokubusisa nakanjani; uma ungakwazi ukwenza lokhu, ngakho-ke nanoma uqonda kangakanani, noma ukhuluma kahle kangakanani, konke kuyobe kuyize! Uma, endleleni yokuthanda uNkulunkulu, ukwazi ukuma ohlangothini lukaNkulunkulu lapho elwa noSathane, futhi ungabuyeli kuSathane, uyobe sewukwazile ukuthanda uNkulunkulu, futhi uyobe ume waqina ebufakazini bakho.
Kuzo zonke izigaba zomsebenzi uNkulunkulu awenzayo phakathi kubantu, ngaphandle kubukeka sengathi ukuxhumana phakathi kwabantu, ongathi yinto edaleke emalungiselelweni enziwa umuntu noma kuvela ekuphazameni nokugxambukela komuntu. Kodwa esithe, sonke isinyathelo somsebenzi, nakho konke okwenzekayo, ukubheja okwenziwe nguSathane phambi kukaNkulunkulu, futhi kudinga ukuthi abantu bame baqine ebufakazini babo kuNkulunkulu. Thatha isibonelo lapho uJobe wayevivinywa: Esithe, uSathane wabheja noNkulunkulu, futhi okwenzeka kuJobe kwakuyizenzo zabantu, nokugxambukela kwabantu. Emuva kwaso sonke isinyathelo uNkulunkulu asenzayo kini kunokubheja kukaSathane noNkulunkulu—emuva kwakho konke kunempi. Isibonelo, uma unobandlululo kubafowenu nodadewenu, uzoba namazwi ofuna ukuwasho—amazwi ozwa ukuthi ngeke amthokozise uNkulunkulu—kodwa uma ungawasho, uyozwa ungenelisekile ngaphakathi, futhi ngaleso sikhathi, impi izoqala ngaphakathi kuwe: “Ngikhulume noma cha?” Yilokhu-ke okuyimpi. Ngakho, kuyo yonke into ohlangana nayo kunempi, futhi uma kunempi kuwe, ngenxa yokubambisana kwakho nokuhlukumezeka kwakho uNkulunkulu uyasebenza phakathi kwakho. Ekugcineni, ngaphakathi kwakho uyakwazi ukubeka udaba eceleni kanti nentukuthelo iyacima ngokwemvelo. Unjalo-ke umthelela wokubambisana noNkulunkulu. Yonke into abantu abayenzayo idinga ukuthi bakhokhe inani elithile ngokuzikhandla kwabo. Ngaphandle kobunzima bangempela, abakwazi ukwanelisa uNkulunkulu, abasondeli nakancane ekutheni benelise uNkulunkulu, futhi basho iziqubulo ezingasho lutho nje! Lezi ziqubulo ezingasho lutho zingamanelisa yini uNkulunkulu? Lapho uNkulunkulu noSathane belwa embusweni kamoya, kufanele umenelise kanjani uNkulunkulu, futhi kufanele ume kanjani uqine ebufakazini bakho Kuye? Kufanele wazi ukuthi yonke into eyenzeka kuwe ingukuvivinywa okukhulu futhi yisikhathi lapho uNkulunkulu ekudinga ukuthi ube nobufakazi. Ngaphandle, azibukeki zibalulekile kangako, kodwa lapho lezi zinto zenzeka ziyakhombisa ukuthi uyamthanda yini uNkulunkulu noma cha. Uma umthanda, uyokwazi ukuma ebufakazini bakho Kuye, futhi uma ungalukhombisi uthando Lwakhe, lokhu kukhombisa ukuthi awuyena umuntu owenza iqiniso, ukuthi awuyena ongenalo iqiniso, futhi awunakho ukuphila, nokuthi ungamakhoba! Yonke into eyenzeka kubantu ilapho uNkulunkulu ebadinga ukuthi bame baqine ebufakazini babo Kuye. Ayikho into enkulu eyenzeke kuwe njengamanje, futhi awunabo ubufakazi obukhulu, kodwa yonke imininingwane yempilo yakho yansuku zonke iphathelene nobufakazi bakho kuNkulunkulu. Uma ungawina ukunconywa ngabafowenu nodadewenu, amalungu omndeni wakho, kanye nabo bonke abaseduze nawe; uma, ngelinye ilanga, abangakholwa befika, futhi bethanda konke okwenzayo, futhi bebona ukuthi konke uNkulunkulu akwenzayo kuhle kakhulu, uyobe wethule ubufakazi. Nakuba ungenakuqonda futhi izinga lakho liphansi, ngokupheleliswa kwakho nguNkulunkulu, uyakwazi ukumanelisa nokuqikelela intando Yakhe. Abanye bazobona ukuthi Wenze umsebenzi omkhulu kangakanani kubantu abasezingeni eliphansi kunabo bonke. Abantu bafika ekumazini uNkulunkulu, futhi babe ngabanqobi phambi kukaSathane futhi bathembeke kuNkulunkulu ibanga elithile. Ngakho-ke abekho abayoba nesibindi njengaleli qembu labantu. Lokhu kuyoba ubufakazi obukhulu kakhulu. Nakuba ungakwazi ukwenza umsebenzi omkhulu, uyakwazi ukwanelisa uNkulunkulu. Abanye abakwazi ukubeka eceleni imibono yabo, kodwa wena uyakwazi; abanye abakwazi ukwethula ubufakazi kuNkulunkulu ngesikhathi bedlula kulokho ababhekane nakho, kodwa uyakwazi ukusebenzisa isimo nezenzo zakho zoqobo ukubuyisela uthando lukaNkulunkulu nokwethula ubufakazi obuqanda ikhanda Kuye. Yilokhu kuphela okungathathwa njengokuthanda uNkulunkulu ngokoqobo. Uma ungakwazi ukwenza lokhu, awufakazi phakathi kwamalungu omndeni wakho, noma phambi kwabantu bomhlaba. Uma ungakwazi ukufakaza phambi kwaSathane, uSathane uyokuhleka, uzokuthatha njengehlaya, njengento yokudlala, uzojwayela ukukwenza isilima, futhi akuphambanise ikhanda. Ngesikhathi esizayo, ungavelelwa yizilingo ezinkulu—kodwa namuhla, uma uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yeqiniso, futhi noma ngabe zinkulu kangakanani izilingo eziphambilini, ngaphandle kokubheka ukuthi kwenzekani kuwe, uma ukwazi ukuma uqine ngobufakazi bakho, futhi ukwazi ukwanelisa uNkulunkulu, kanjalo inhliziyo yakho iyoduduzeka, futhi angeke wesabe nanoma zinkulu kangakanani izilingo obhekana nazo ngesikhathi esizayo. Anikwazi ukubona ukuthi kuzokwenzekani ngesikhathi esizayo; kuphela ninganelisa uNkulunkulu ezimweni zanamuhla. Anikwazi ukwenza umsebenzi omkhulu, futhi kufanele nigxile ekwaneliseni uNkulunkulu ngokuzizwela amazwi Akhe empilweni yangempela, futhi ngokuba nobufakazi obunamandla obuqanda ikhanda obuthela uSathane ngehlazo. Nakuba inyama yakho izosala inganelisekile futhi uke wahlupheka, uyobe umanelisile uNkulunkulu futhi wahlaza kuSathane. Uma uhlale wenza ngale ndlela, uNkulunkulu uzovula indlela phambi kwakho. Lapho ngelinye ilanga, isilingo esikhulu sifika, abanye bayowa, kodwa uyokwazi ukuma uqine: Ngenxa yenani olikhokhile, uNkulunkulu uyokuvikela ukuze ume uqine futhi ungawi. Uma, ngokujwayelekile, ukwazi ukwenza iqiniso futhi wenelise uNkulunkulu ngenhliziyo Emthanda ngempela, ngokunjalo uNkulunkulu uyokuvikela ngokuqinisekile ezivivinyweni zesikhathi esizayo. Nakuba unobuphukuphuku, futhi unesikhundla esiphansi futhi unezinga eliphansi, uNkulunkulu ngeke akubandlulule. Kuncike ekutheni ukukhuthazwa kwakho kulungile yini. Namhlanje, uyakwazi ukwanelisa uNkulunkulu, lapho uqikelela ngisho umniningwane omncanyana, wanelisa uNkulunkulu kuzo zonke izinto, unenhliziyo emthanda ngempela uNkulunkulu, unikela inhliziyo yakho yeqiniso kuNkulunkulu, futhi nakuba kunezinto ezithile ongaziqondi, uyakwazi ukuza phambi kukaNkulunkulu ukuze ulungise ukukhuthazwa kwakho, futhi ufune intando kaNkulunkulu, futhi wenza konke okudingekayo ukuze wanelise uNkulunkulu. Mhlawumbe abafowenu nodadewenu bazokulahla, kodwa inhliziyo yakho izobe yanelisa uNkulunkulu, futhi ngeke ufise ukuthokozisa inyama. Uma wenza kanje njalo, uyovikelwa lapho izilingo ezinkulu zikufikela.
Yisiphi isimo ngaphakathi kubantu, lezi zilingo eziqondiswe kuso? Ziqondiswe esimweni esihlubukayo kubantu esingakwazi ukwanelisa uNkulunkulu. Kuningi okungekho msulwa kubantu, futhi kuningi ukuzenzisa, ngakho uNkulunkulu ubafaka ezilingweni ukuze abahlambulule. Kodwa uma, namuhla, ukwazi ukumanelisa, ngokunjalo izilingo zangesikhathi esizayo ziyoba ukupheleliswa kuwe. Uma, namuhla, ungakwazi ukumanelisa, ngokunjalo izilingo zangesikhathi esizayo ziyokuyenga, uyothi ungahlosile uwe phansi, futhi ngaleso sikhathi ngeke ukwazi ukuzisiza, ngoba awukwazi ukuqhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu, futhi awunaso isigqi sangempela. Ngakho, uma ufisa ukuma uqine ngesikhathi esizayo, kungcono wanelise uNkulunkulu, futhi umlandele kuze kube sekugcineni, namhlanje kufanele wakhe isisekelo esinamandla, kufanele wenelise uNkulunkulu ngokwenza iqiniso ezintweni zonke, futhi uqikelele intando Yakhe. Uma wenza ngale ndlela njalo, kuyoba khona isisekelo ngaphakathi kuwe, futhi uNkulunkulu uyokunika inhliziyo emthandayo, futhi uyokunika ukukholwa. Ngelinye ilanga, lapho isilingo sikwehlela ngempela, kungenzeka uzwe ubuhlungu obuthile, futhi ube nezikhalo kuze kufike ezingeni elithile, futhi uzwe usizi oluminyanisayo, ongathi ufile—kodwa uthando lwakho lukaNkulunkulu ngeke lushintshe, futhi luyojula nakakhulu. Zinjalo izibusiso zikaNkulunkulu. Uma ukwazi ukwamukela konke lokho uNkulunkulu akushoyo nakwenzayo namuhla ngenhliziyo enokulalela, ngokuqinisekileyo uyobusiswa nguNkulunkulu, ngaleyo ndlela uyoba umuntu obusisiwe nguNkulunkulu, futhi owamukela isithembiso Sakhe. Uma namuhla ungenzi, uma izilingo zikwehlela ngelinye ilanga uyobe ungenakho ukukholwa noma inhliziyo enothando, futhi ngaleso sikhathi isivivinyo siyophenduka isilingo; uyophoseka ekulingweni kukaSathane futhi ungabi nayo indlela yokubaleka. Namhlanje, ungakwazi ukuma uqine lapho isivivinyo esincane sikwehlela, kodwa ngeke ngempela umane ukwazi ukuma uqine lapho isivivinyo esikhulu sikwehlela ngolunye usuku. Abanye abantu bayazikhukhumeza, futhi bacabanga ukuthi kakade sekusele kancane bapheleliswe. Uma ungayi ngokujula ezikhathini ezinjalo, futhi uqhubeke uzithele ngabandayo, uyoba sengozini. Namuhla, uNkulunkulu akawenzi umsebenzi wezivivinyo ezinkulu, uma ubuka yonke into ibukeka ihamba kahle, kodwa uma uNkulunkulu esekuvivinya, uyothola ukuthi uyashoda kakhulu, ngoba isigqi sakho sincane kakhulu, futhi awukwazi ukubekezelela izivivinyo ezinkulu. Uma, namuhla, ungaqhubekeli phambili, uma uhlala endaweni eyodwa, ngakho lapho kufika isivunguvungu esikhulu uyowa. Kufanele nivamise ukubuka ukuthi isigqi senu sincane kangakanani; ingale ndlela kuphela lapho niyoba nenqubekela phambili khona. Uma kungesikhathi sezivivinyo lapho ubona khona ukuthi isigqi sakho sincane kakhulu, ukuthi amandla akho emancane nokuthi kuncane kakhulu okungaphakathi kuwe okuyiqiniso, nokuthi awuyifanele intando kaNkulunkulu—futhi uma uzibona lezi zinto ngaleso sikhathi, uyobe sewushiywe isikhathi.
Uma ungasazi isimo sikaNkulunkulu, nakanjani uyowa ngesikhathi sezivivinyo, ngoba awazi ukuthi uNkulunkulu ubaphelelisa kanjani abantu, nokuthi usebenzisa ziphi izindlela ukuze abaphelelise abantu, futhi uma izivivinyo zikaNkulunkulu zikufikela futhi zingahambisani nemibono yakho, ngeke ukwazi ukuma uqine. Uthando lukaNkulunkulu lweqiniso, yisimo sakhe sisonke, futhi uma isimo sikaNkulunkulu sivezwa kuwe, lokhu kulethani enyameni yakho? Uma isimo esilungile sikaNkulunkulu sivezwa kuwe, inyama yakho ngokungenakugwemeka iyozwa ubuhlungu obukhulu. Uma ungabuzwa lobu hlungu, ngeke uze upheleliswe nguNkulunkulu, futhi ngeke ukwazi ukunikela uthando lweqiniso kuNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ekuphelelisa, uzokukhombisa isimo Sakhe sisonke. Kusukela esikhathini sokudala kuze kube namuhla, uNkulunkulu akakaze akhombise isimo Sakhe sisonke kumuntu—kodwa ngezinsuku zokugcina uyasiveza kuleli qembu labantu abamisele phambilini futhi wabakhetha, futhi ngokuphelelisa abantu uveza obala izimo Zakhe, ngalokho wenza iqembu labantu liphelele. Lunjalo uthando lweqiniso lukaNkulunkulu lwabantu. Ukuzwa uthando lweqiniso lukaNkulunkulu kudinga ukuthi abantu babekezelele ubuhlungu obugedlisa amazinyo, futhi bakhokhe inani eliphezulu. Isemva kwalokhu kuphela lapho beyozuzwa khona nguNkulunkulu futhi bakwazi ukubuyisela uthando lwabo lweqiniso kuNkulunkulu, futhi ilapho kuphela inhliziyo kaNkulunkulu iyokwaneliseka khona. Uma abantu befisa ukupheleliswa nguNkulunkulu, futhi uma befisa ukwenza intando Yakhe, futhi banikele uthando lwabo ngokuphelele kuNkulunkulu, ngakho kufanele bezwe ubuhlungu obukhulu kanye nezinhlupheko eziningi ezivela ezimweni, ukuzwa ubuhlungu obudlula ukufa, ekugcineni bayophoqeleka ukuba banikeze inhliziyo yabo yeqiniso kuNkulunkulu. Noma umuntu umthanda ngeqiniso uNkulunkulu noma cha, kubonakala ngesikhathi sobunzima nokucwengwa. UNkulunkulu uyaluhlambulula uthando lwabantu, futhi nalokhu kwenzeka kuphela phakathi kobunzima nokucwengwa.
Okwedlule：Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu
Okulandelayo：Inkulumo Emfishane Mayelana nombhalo othi “Umbuso Weminyaka Eyinkulungwane Usufikile”
Mhlawumbe uhambo lwenu lokholo kuNkulunkulu seluthathe unyaka owodwa noma emibili, futhi ekuphileni kwakho kule minyaka ubulokhu ubekezelela ubunzima …
Ukuhlola ukuthi konke okwenzayo kulungile yini, nokuthi uNkulunkulu uyazibona yini zonke izenzo zakho, kuyimiyalo yokuziphatha yalabo abakholelwa kuNk…